မမ...................ကလေးမလေးက နောက်မှ ကျွန်မကိုသိုင်းဖက်ပြီးပြောသည်။ ကျွန်မတချက်ပြုံးလှည့်ကြည့်ပြီး သူမအားရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်သည်။ ဒီလောက်ကြာသည်အထိ အတူနေလာသော်လည်း ကျွန်မသူမ၏ အရိပ်အကဲကို မသိသေးသည့်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ရပေလိမ့်မည်။ အမှန်ဆိုလျှင် ကျွန်မသိသင့်သည်။ သူမခေါ်လိုက်သော မမဆိုသည့် နောက်ကွယ်တွင် ကြေကွဲမှုတစ်ခု ခိုအောင်းနေသည်ကို ကျွန်မ သိသင့်သည်။ဟုတ်ပါသည်...သူမကြေကွဲနေခဲ့ပါသည်။
"မမ.....ညီမလေးတို့ ညီအစ်မသုံးယောက် ကလေးမြို့ကို နောက်တပါတ်ထဲသွားရမယ်မ......မေမေကတော့ ရန်ကုန်မှာပဲနေခဲ့လိမ့်မယ်..... ဖေဖေကတော့ ဗန်းမော်ကိုပြန်သွားရလိမ့်မယ်.....မ။ ကလေးမှာက ညီမလေးအဒေါ်တွေ ရှိတယ်။ သူတို့က သဘောအရမ်းကောင်းကြတယ်မရဲ့"
ကျွန်မ လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်တွင် ကြားလိုက်ရချိန်မှာ ကျွန်မ အလွန်အံသြသွားမိသည်။ ပုံမှန်ဆို သူမငိုပေလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ကြိမ်သူမ မငိုပါချေ။ သူမကြေကွဲနေဟန်ရှိသော်လည်း မငိုတော့ချေ....ငိုအားသန်သော ဒီကလေးမလေး...အရွယ်နှင့်မမျှအောင် လောကဓံခံရသော ဒီကလေးမလေး.. ဒီတစ်ကြိမ်တော့ မငိုတော့ချေ.......
ဒီနေ့သည် ကလေးမလေး ကလေးမြို့ကိုသွားမည့်နေ့ဖြစ်သည်။ သူမက ကျွန်မကို ကလေးမြို့ကို လိုက်ဖို့ခေါ်နေသည်။ ဟုတ်ပါသည် ကျွန်မလည်း ထိုကလေးမလေးအား အလွန်ပင် သံယောဇဉ်တွယ်နေမိသည်။ သို့သော် ကျွန်မဘ၀ကိုကား ကျွန်မ မပိုင်။ ကျွန်မ ဘာမှမပြောတော့ပဲ ပြုံးနေလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမက "ဟုတ်တယ်နော်မ မ..မှာမှ လေယာဉ်လက်မှတ်မရှိတာနော်.. လေယာဉ်လက်မှတ်က ဈေးကြီးတယ်မရဲ့ ... ညီမလေးစုထားတာနဲ့လည်းမလောက်လို့ လောက်ရင် မကိုပါ တခါတည်းခေါ်သွားတယ်သိလား..." ကျွန်မ ရယ်လိုက်မိသည်။ " မရယ် ညီမလေး ဖုန်းတော့ဆက်မှာပေါ့" တဲ့လေ....
ကျွန်မ လေယာဉ်ကွင်းကို လိုက်ပို့ခွင့်မရှိပါ....နောက်ထပ်သူမနှင့် တွေ့ရဖို့လည်း မသေချာတော့ပါ....နောက်ပြီး...ကျွန်မ ဘယ်ကိုသွားလို့ ဘယ်ကိုလာရမှန်းလည်းမသိပါ....ကျွန်မစဉ်းစားနေခိုက် ကျွန်မခေါင်းတွေမူးလာသည်။ ကျွန်မ ခေါင်း...တွေ....မူး....လာ.......
ကျွန်မ ပြန်သတိရလာချိန်တွင် ကျွန်မနှင့် မရင်းနှီးသော နေရာသို့ရောက်နေသည်။ ဒီတစ်ခါလည်း ကျွန်မ ထပ်ပြီးတော့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်အား ထပ်ပြီး စောင့်ရှောက်ရပေဦးမယ်....ကျွန်မ၏တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရပေဦးမယ်....ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မ စောင့်ရှောက်ရမည့် ကောင်မလေးနောက် တကောက်ကောက်လိုက်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်မ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ခွင့်ရှိပေသည်။
တစ်နေ့ကျွန်မ စောင့်ရှောက်နေသည့် ကောင်မလေးကျောင်းသို့ လိုက်သွားတုန်း....
"မ....." ကျွန်မလှည့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကျွန်မကိုခေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သာမန်ဆိုလျှင် ကျွန်မကို လူသားတို့မမြင်ရချေ။ ထိုကောင်မလေးက ကျွန်မကိုမြင်သည်။ ကျွန်မ အလွန်ပင် အံသြမိသည်။ " မ.. ညီမလေးကို မမှတ်မိဘူးလား" ကျွန်မ ၀မ်းသာသွားသည်.. ကျွန်မအရင်တချိန်က စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သော ကလေးမလေး...ဟုတ်သည် ကျွန်မ သူမ၏ ပြောင်းလဲသွားသော ရုပ်သွင်ကို မမှတ်တော့သော်လည်း သူမ၏ အသံကိုမှတ်မိသည်။ ဟုတ်သည် ထိုကလေးမလေးပင်။
" ဟိတ်.....................................အရင်တုန်းကလိုပဲ ငိုသေးလား " ဟု ကျွန်မက ချစ်စနိုးနဲ့ခေါင်းကိုအသာအယာပွတ်ပြီးမေးလိုက်မိသည်။ သူမနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသော ခဏတာအတွင်း ဆယ်စုနှစ်ဆိုသော ကာလတစ်ခုကို ကျော်လွန်သွားခဲ့မှန်း ကျွန်မ မသိခဲ့ချေ....သူမက ကျွန်မကို ပြုံးပြသည်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ကြာကြာတောင် တွေ့ခွင့်မရလိုက်ပါချေ။ သူမကျောင်းတက်စရာရှိသေးသည်ဟု ဆိုလာသောကြောင့် ကျွန်မတို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။ ယခုကျွန်မ၏တာဝန်သည်လည်း ပြီးဆုံးတော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်မ မြန်မာနိုင်ငံပြန်လျှင် အိမ်ကိုဘာမှာဦးမလဲဟု မေးလိုက်သောအခါ " မမ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေး အမေကိုပြောပေးလိုက်ပါနော်............... ညီမလေး မငိုတော့ပါဘူးလို့....ညီမလေး အရင်လို မငိုတော့ပါဘူးလို့ ညီမလေး အခက်အခဲတွေကို ငိုပြီး မဖြေရှင်းတော့ပါဘူးလို့.... ပြောဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ပါနော် ဆက်ဆက်ပြောပေးလိုက်ပါနော် မ"
Posted by cockroach at 9:20 PM 1 အကြံပေးဝေဖန်စာများ
အဲဒါ.....................အဲဒါ ညီမလေးရဲ့ ဖေဖေ..ဟုတ်တယ် ဖေဖေငိုနေတာမရဲ့.. ဖေဖေငိုနေတာ.. ညီမလေးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ.. အခုချိန်မှာ ညီမလေး ဘာကူညီနိုင်ဦးမှာလဲ... ဘယ်လိုလုပ်မှ ဒီဒုက္ခတွေ ပြီးဆုံးမှာလဲ မရယ်.. ညီမလေးကိုပြောပါအုံး.. အခုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ... ကျွန်မ ဘာပြန်ပြောရမှာလဲ..ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် ဒီနေရာကို ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိတာ.. ကျွန်မကရော ဘာကူညီနိုင်အုံးမှာလဲ.. ကျွန်မအခုချိန်မှာ တတ်နိုင်တာဆိုလို့ သူပြောသမျှကို နားထောင်ပေးဖို့ပဲရှိတာပဲ.. ကျွန်မ မငိုပါနဲ့လို့တော့ မတားချင်ဘူး.. ဒါပေမယ့် ကျွန်မ သူ့ကိုမငိုစေချင်ပါ.. မငိုပါနဲ့ ကလေးရယ် .. ကျေးဇူးပြုပြီး မငိုပါနဲ့....
ကျွန်မ တစ်ချက်မှေးခနဲ အိပ်ပျော်ရာမှ နိုးလာသည်.. ဘေးနားကြည့်လိုက်တော့ သူမလည်း ကျွန်မဘေးမှာ အိပ်ပျော်နေသည်။ သူမအဖေ ၀ယ်လာဟန်တူသော အဖြူရောင် handbag လေးကို လွယ်ထားရင်း အိပ်ပျော်နေသည်။ ကျွန်မကိုလာရှာရင်း.. ကျွန်မအိပ်နေသည်ကိုမြင်ပြီး..သူပါဘေးနားဝင်အိပ်ပုံရသည်။ ကျွန်မ အသာအယာ သူမဆံမျှင်တွေကို သပ်ပေးလိုက်သည်။ အတူနေလာသော သံယောဇဉ်ကြောင့်ပဲလားမသိ.. ကျွန်မ သူ့ကိုမထိခိုက်စေချင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်မသူ့ကို ပျော်အောင်ထားချင်သည်။ နယ်ကျွံနေသော အတွေးတွေကြောင့် သူမနိုးလာသည်ကိုပင် ကျွန်မ သတိမထားမိ။ ကျွန်မ သတိထားမိလိုက်လို့ ကြည့်လိုက်သောအချိန်မှာ ကျွန်မ မျက်စိရှေ့မှာ အခွံမာသော အသီးတစ်လုံး......
မမ စားကြည့်.. စားကောင်းတယ်.. သူမရဲ့ သေးသွယ်သော လက်ကလေးကိုရမ်းပြီး.. ကျွန်မမျက်စိရှေ့မှာ အသီးကို ဘယ်ညာကစားပြနေသည်။ ကျွန်မ ပြုံးပြီး သူမပေးသော အသီးလေးကို လှမ်းယူလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမကို လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ ကြည့်စမ်း... သူမကျွန်မကို ပြုံးပြနေသည်.... တစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲ.. ကျွန်မ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေသလိုခံစားလိုက်ရသည်... ချက်ချင်းကျွန်မ ရင်ထဲဟာသွားသည်။ ကလေးမလေးပုံစံက တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်နေသည်... ကျွန်မ ပြာသွားသည်.. သူမ ဘာဖြစ်ထားတာပါလိမ့်.....ဒါပေမယ့် သူမ အပြုံးက ဖြူစင်မှု ပကတိ.........
ကျွန်မရဲ့ ပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကို ခဏထိန်းနိုင်အောင် မျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်သည်။ ကျွန်မအကောင်းဆုံးအခြေအနေကို စဉ်းစားကြည့်သည်.. မမ ဘာဖြစ်လို့လဲ.. သူမ ကျွန်မ လက်ကိုလာဆွဲပြီး တိုးတိုးလေး ပြောရှာသည်... ကျွန်မ မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်... နောက်မှ အတွေးတစ်ခု လက်ခနဲ ၀င်လာသည်... ကျွန်မ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်လိုက်မိသည်။ သူမကတော့ ကျွန်မကို မျက်လုံးလေးဝိုင်းပြီး ကြောင်ကြည့်နေသည်။ ကြည့်စမ်း... ဒီကလေးမလေးရဲ့ ရှေ့က သွားနှစ်ချောင်းမှ မရှိတော့တာပဲ။ အရင်နေ့တွေက သူမပြောပြောနေလို့တော့ သတိထားလိုက်မိသေးသည်.. ဒါပေမယ့် အမှတ်တမဲ့ပါပဲ... သူမသွားနှစ်ချောင်းနဲ့နေကြောင်းကို... ထို့နောက် ကျွန်မမေးလိုက်သည်... ရှေ့သွားနှစ်ချောင်း ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ.. ဟီး ကြွက်သွားနဲ့ ညီမလေးသွားနဲ့လဲလိုက်ပြီလေ မရဲ့... ဒီနေ့ မနက် သစ်ကြားသီးကို သွားနဲ့ကိုက်လိုက်တာ ကျိုးသွားတယ်.. နာတော့သိပ်မနာဘူး.. ဟီး... သြော်... ဒါနဲ့ စောနက ညီမလေးပေးတဲ့ အသီးရော.. သွားနဲ့တော့မကိုက်နဲ့.. မရေ..တံခါးနဲ့ညှပ်စား.. သိလား..ကျွန်မ သူမခေါင်းလေးကို အသာအယာထုလိုက်မိသည်... သေချာသည်မှာတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ရယ်မောမိလိုက်ကြသည်..
Posted by cockroach at 10:16 PM0အကြံပေးဝေဖန်စာများ
ကျွန်မကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနှင့် စိတ်ထဲမှာ တမျိုးခံစားရလာတယ်။ သူ …သူ … ခုန်ချတော့မလို့လား။ မဖြစ်ဘူး သူခုန်ချလို့မဖြစ်ဘူး။ သူဘ၀ကို ဒီလိုပဲအရှူံးပေးတော့မလို့လား။ ကျွန်မမှာတာဝန်အပြည့်ရှိတယ်။ ကျွန်မသူ့ကိုစောက်ရှောက်ဖို့ ဒီကိုရောက်လာတာဖြစ်ရမယ်။ကျွန်မသူ့ကိုပြန်လာဖို့ အော်ပြောလိုက်တယ်။ သူနားမထောင်ပါ။ တရွေ့ရွေ့ဆက်သွားနေသည်။ တစ်နေရာအရောက် သူရပ်ပြီး အောက်ကိုငုံ့ကြည့်နေပြန်တယ်။ ကျွန်မလည်း လိုက်တက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်သည်။ကျွန်မ ထုတ်တန်းပေါ်ရောက်သည်အထိ သူဒီတိုင်းပဲ ရှိနေပါစေ။ ကျွန်မ တဖြည်းဖြည်း အပေါ်တက်သွားသည်။ တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့ အမြင့်ကြောင့် ကျွန်မမိုက်ခနဲ မူးသွားသည်။ မျက်စိအမြန်မှိတ်ပြီး နီးစပ်ရာ တိုင်တစ်တိုင်ကို ကိုင်လိုက်သည်။ သူကတော့ ရပ်မြဲရပ်နေတုန်းပဲ။ ကျွန်မအတွေးတစ်ချက်ပေါ်လာသည်။ ကြည့်ရတာ သူသေမှာကို ကြောက်နေလို့ ခုန်မချတာဖြစ်မယ်။ အင်းပေါ့လေ ကလေးပဲ ပေါက်ကရသာတွေးရုံတွေးတာ တကယ်တော့လည်း ဘယ်လုပ်ရဲပါ့မလဲနော်။ အမြင့်အဟုန်ကြောင့် ဒူးခေါင်းချောင်နေတဲ့ ကျွန်မ သူ့အားသွားရောက်၍ ဆွဲယူနိုင်အားလည်းမရှိပါ။ တော်သေးသည် သူ့၏ မလုပ်ရဲတဲ့စိတ်ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ကျွန်မရပ်မြဲနေရာမှာပဲ သူ့ကို ကြည့်နေလိုက်မိတယ်။ ထို့နောက်သူက ကျွန်မဘက်သို့ တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူကပြောတယ် သူတို့သူ့ဦးလေးအိမ်ဖြစ်တဲ့ ယခုအိမ်လေးကိုဆောက်တုန်းက လူတစ်ယောက် ထုတ်တန်းပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးသေဖူးတယ်တဲ့။ သူ့ဘာသူ အရက်မူးပြီး ပြုတ်ကျသေတာတဲ့။ သူကဆက်ပြောသေးတယ်။ လူတွေသေသွားပြီးရင် ဘယ်ကိုသွားကြသလဲတဲ့။ ကျွန်မ မဖြေနိုင်ပါ။ ဟော ……ပြောရင်းနဲ့ သေခြင်းတရားတွေပါလာပြီ။ မဖြစ်ပါ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်ပါ။ ကျွန်မ အားယူပြီးထကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်မဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဒီလောက်အမြင့်လေးကို ကြောက်နေရတာပါလိမ့်။ ၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်တောင် မကြောက်တဲ့ ထိုအမြင့်ကို ကျွန်မကြောက်နေတာ အံ့သြစရာပဲ။ ကျွန်မထိုကလေးမလေးအားပြောလိုက်သည်။ သမီးမလုပ်နဲ့နော် စိတ်လိုက်မာန်ပါမလုပ်ပါနဲ့နော်။ အမတောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စက အခုလိုဖြေရှင်းယုံနဲ့ပြီးမှာမှမဟုတ်တာ။ သူကျွန်မကို ဘာမှမပြောပဲငေးကြည့်နေသည်။ အဲဒါမှ ဒုက္ခ။ ကျွန်မစကားများမှားသွားပြီလားမသိ။ သူကြည့်မြဲကြည့်နေပြန်သည်။ ထို့နောက် သူက အမ ညီမလေး ဘယ်တော့မှ ခုန်မချပါဘူးတဲ့။ အခုမှ ကျွန်မသက်ပြင်းချနိုင်တော့သည်။ သူက လူကြီးလေးတစ်ယောက်ပမာ ဆက်ပြောတယ်။ သူသေရမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ သူသေဖို့လည်း အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားဖူးတယ်တဲ့။ သူ့အစ်မ မကေ ကိုတောင် အဲဒီအကြောင်းတွေ ပြောပြလိုက်သေးတယ်တဲ့။ အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ပေါ်လာတဲ့ အတွေးတစ်ခု ရှိတယ်တဲ့။လူတွေသေရင် သေသွားတဲ့သူအတွက်ကတော့ အေးချမ်းသွားပေမယ့် အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေက စိတ်ဆင်းရဲပြီး ကျန်ခဲ့တာတဲ့။ ပြီးတော့ အခုချိန်မှာ သူ့တို့ မိသားစု စားစရာတောင်မရှိသေးတာ သူကပါ အခုချိန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေလိုက်ရင် အသုဘစရိတ်ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲတဲ့။ ကျွန်မရယ်ချင်သွားသည်။ ကျွန်မ မရယ်မိအောင် မနည်းထိန်းရသည်။အော် ကလေးမရယ် တော်တော်လည်းသိတတ်ပါပေတယ်။ ပြောရရင် သူဥာဏ်မှီသလောက် တွေးတတ်တာလေးကိုပဲ ချီးကျူးမိပါတော့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ဒီလိုအတွေးက သူ့ကို ကယ်ခဲ့တာပါပဲ။
နောက်နေ့လဲ ကျွန်မသူ့အနားမှာ ရှိနေပြန်သည်။ ကျွန်မဘယ်ရောက်နေတာလဲ။ ကယ်ပါအုံး။ ကျွန်မ ဘာလို့ဒီနေရာရောက်နေတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီကလေးမလေးကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ကျွန်မကို တကယ်ပဲ ဒီလွှတ်လိုက်တာလား။ ဒါဆို ကျွန်မရဲ့ ဘ၀အမှန်က ဘာလဲ။ ကျွန်မအတွေးတွေကို ထိုကလေးမလေးက ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပြန်ပါသည်။ မမ သိလား ဇော်ဝမ်းကို။ ရုပ်ရှင်မင်းသားလေ။ သီချင်းလည်းဆိုတယ်လေ။ အခုသူအိမ်ရှေ့မှာသိလားမ။ ကျွန်မ သူ့မျက်နှာလေးပြုံးနေတာကို ပထမဆုံးမြင်ဖူးလိုက်သည်။ ဒီလိုကျတော့လည်း ကလေးမလေးက ချစ်စရာကောင်းသား။ ဟုတ်လားသမီးရဲ့ ဘာလာလုပ်တာလဲ။ ညီမလေးတို့ ကျောက်စိမ်းကို လာကြည့်တာမရဲ့။ ကျောက်က မိုးကုတ်က ယူလာတုန်းကတော့ သိန်းတစ်ရာလောက်တန်တယ်ပြောတယ်။ အခု ပြန်ရောင်းမယ်လုပ်တော့ အထဲက ကျောက်ရည်တွေ ရှိတော့ဘူးတဲ့။ လိမ်သွားကြတာလေ ညီမလေးတို့ကို။ မေမေတို့ကလည်း မသိတော့ ခံရတာပေါ့။အခု ဇော်ဝမ်းက ပွဲစားလာလုပ်တာ။ အမြန်ရောင်းနိုင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းတယ်မရေ။ တကယ်ပြောတာ။ အဲဒါဆိုရင် နဲနဲတော့ အသက်ရှူချောင်တာပေါ့မရေ။ လာသေးသည်။ သူ့အမေပြောသော လေသံကို ဖမ်း၍ပြောနေပုံကိုက။ မ ညီမလေး လက်မှတ်သွားထိုးခိုင်းရင် ကောင်းမလား။ ကြောက်တော့ကြောက်တယ်။တော်ကြာ သူက မထိုးပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။ အဲဒီတော့ ကျွန်မက သွား သွား ဘာမှမဖြစ်ဘူး ထိုးခိုင်းလိုက် ကျွန်မနှစ်ခွန်းမပြောလိုက်ရပါ။ သူ ဘယ်တုန်းကတည်းက ယူထားလဲမသိတဲ့ စာအုပ်လေးနဲ့ ဘောပင်လေး ကိုင်ပြီး သွားပါလေတော့သည်။ အခုသူပျော်နေပြန်ပြီ။ ဘယ်အချိန်ုပြန်ငိုအုံးမလဲမသိ။
မမ သိလားဒီနေ့ ဖေဖေရောက်မယ်တဲ့။ ဟုတ်လား သမီးလို့ကျွန်မပြောလိုက်ပြီး သူ့မျက်နှာကို အကဲခတ်လိုက်သည်။ သူ့မျက်နှာ ရွှင်ပျမနေပါ။ သူ့စိတ်ထဲသို့ စိတ်ညစ်စရာများဝင်လာပြန်ပြီထင်သည်။ သူသည် တခါတလေ ကျွန်မကိုမေ့နေတတ်သည်။ တခါတလေ ကျွန်မကို ရှာတတ်ပြန်သည်။ ကျွန်မဒီအိမ်ထဲရောက်နေသည်ကို သူမှလွဲ၍ တခြားဘယ်သူမှမသိ။ ကျွန်မပြောထားလို့ သူကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြော။ အခုလည်း အခန်းထဲလာပြီး တိုးတိုးပြောနေပြန်သည်။ ဖေဖေလေ တိုက်ရင်းမှူးစာမေးပွဲကျတယ်။ မေမေလည်း တော်တော်စိတ်ညစ်နေတယ်။ ဖေဖေမှာ ဘီပိုးရှိလို့တဲ့။ အခုအရပ်ဘက်ပြောင်းရတော့မယ်မတဲ့။ ကောင်းတော့လည်းကောင်းပါတယ်။ ဖေဖေအလုပ်က ဘာပိုက်ဆံမှ မရတာတဲ့လေ။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေလာခါကျရင်……………………ဆိုပြီးသူ့အသံတိမ်ဝင်သွားသည်။ ထို့နောက် သူခေါင်းငိုက်စိုက်နှင့် အခန်းအပြင်ပြန်ထွက်သွားပြန်သည်။အင်း ဟုတ်သည် အကယ်၍ သူ့အဖေလာလို့ ဒီအကြောင်းတွေသိခဲ့သော်………………………..။
“ဟီး…………….ဟီး………” ကျွန်မလန့်သွားသည်။ ကျွန်မသိတော့သိလိုက်သည်။သူတို့အိမ်သားထဲက တစ်ယောက်ယောက်ငိုနေတာ။ ကျွန်မ ထိုကလေးမလေး အခန်းထဲဝင်လာမှာကို မျှော်နေမိသည်။ ဒီလိုမှ ကျွန်မ ဇာတ်ကြောင်းအကုန်သိမှာလေ။ “ကလစ်…” ကျွန်မအသံကြားလိုက်သည်။တံခါးဖွင့်သံ။ သူဝင်လာတာဖြစ်မည်။ ကျွန်မ အသာအယာလေး ခေါင်းငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်သည်။ ကျွန်မ အမြန်ထွက်လိုက်ပြီး သူ့ဆီသွားလိုက်သည်။ သူကျွန်မကိုပင် မမြင်။ အိပ်ယာပေါ်သို့ ခေါင်းအပ်လိုက်သည်။ ကျွန်မသိသည် သူငိုနေပြန်ပြီ။
ကျွန်မ သူ့ပုခုံးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်လိုက်သည်။ သူလှည့်မကြည့်ပါ။ ငိုမြဲငိုနေသည်။ ကျွန်မ သူ့ခေါင်းလေးအား အသာအယာပုတ်ပေးရုံမှ လွဲ၍ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ချေ။ သူငိုရတာ မောလွန်းလို့ ကျွန်မပေါင်ပေါ်အိပ်ပျော်သွားသည်။ ကလေး အိပ်လိုက်ပါ။စိတ်ညစ်စရာတွေမေ့လိုက်ပြီးတော့ အိပ်လိုက်ပါနော်။ ကလေး ကောင်းကောင်းမအိပ်ရတာကြာနေပြီလေ။
တအောင့်ကြာတော့ သူတချက်လူးလိမ့်လာသည်။ သူပြန်နိူးလာပြန်သည်။ အော် အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် ကောင်းကောင်းမအိပ်စက်ခိုင်းရလောက်အောင် ကံကြမ္မာက ဆိုးလှပါလားနော်။ သူကျွန်မကို ရင်ဖွင့်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်သည်။ ကျွန်မလည်း ဂရုတစိုက်နားထောင်ဖို့ သူ့အနားတိုးလိုက်သည်။ မမ စောနက ငိုသံကြားတယ်မို့လား။ အဲဒါတခြားသူမဟုတ်ဘူးမ။ အဲဒါ………………………..
Posted by cockroach at 11:46 PM4အကြံပေးဝေဖန်စာများ
ကျွန်မ မနေ့က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်။ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ အခန်းထဲမှာ စောင်ခြုံပြီးငိုနေတယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ငိုနေတာကို သိမှာစိုးရိမ်နေတဲ့ပုံပဲ။ ကျွန်မလည်း သူ့ကိုကြည့်ပြီး ငိုချင်သွားတယ်။သိချင်စိတ်နဲ့ စောင်ကိုအသာအယာ မပြီးမေးလိုက်မိတယ် ဘာလို့ငိုနေတာလဲလို့။ သူ ကျွန်မကို မော့ပြီး အားကိုးတကြီးနဲ့ ကြည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူခဏတွေဝေသွားတယ်။ သူတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ သူကို သူ့အကြောင်းပြောရမှာကို ကြောက်နေသလိုပဲ။ ပြီးတော့ သူကျွန်မကိုပြောပြတယ် သူ့ကို သူ့အမေက ဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့လေ။ တကယ်တော့ ဒီနေ့က သူ့မွေးနေ့တဲ့၊ အခု ၈နာရီတောင်ထိုးတော့မယ် သူ့အမေက အခုထိပြန်မလာသေးဘူးတဲ့။ အခါတိုင်းနှစ်တွေဆိုရင် သူ့အမေက သူ့ကိုအင်္ကျီလှလှလေးတွေ ၀ယ်ပေးနေကျတဲ့ ကိတ်မုန့်အကြီးကြီးဝယ်ပြီး အိမ်နီးနားချင်းတွေကို ဖိတ်ပြီးမုန့်ကျွေးနေကျတဲ့လေ။ ပြီးတော့ ကျွန်မပုခုံးပေါ်လာမှီပြီငိုတယ် ကျွန်မလည်း ဘာရယ်တော့မသိ သူ့ကိုအရမ်းသနားသွားတယ်။ ကျွန်မဘယ်ဘက်လက်နဲ့ သူ့ကျောကို မရဲတရဲ အသာအယာပုတ်ပေးလိုက်မိတယ်။ ထို့နောက် သူကဆက်ပြောတယ်။ ဒီနှစ်သူတို့အိမ် စီးပွားရေးမကောင်းဘူးတဲ့။ လူလိမ်ခံရတာလို့တော့ လူကြီးတွေပြောတာ သူကြားတယ်တဲ့။ အခုသူ့အမေက အဲဒီလိမ်တဲ့သူအကြောင်းကိုသွားစုံစမ်းတာတဲ့။ သူမငိုသင့်မှန်းကို သူသိတယ်တဲ့။ အခုချိန်သူ့အမေပြန်လာရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာတဲ့။ အဲဒီတော့ သူမငိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရှူိက်ကြီးတငင်ပြောရှာတယ်။
“ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ……..”
“မငု တံခါးဖွင့်အုံး၊ ငါ နင်ငိုနေတာသိတယ်၊ အခုဖွင့်” ဟော ကလေးမလေးရဲ့ အမဖြစ်ဟန်တူတဲ့ နောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက် တံခါးဖွင့်ဖို့ပြောနေတယ်။
“ညီမလေး……………………………. မငိုပါဘူး မကေ။” လို့ပြောပြီး ထိုကလေးမလေး မျက်ရည်ကို ဂါဝန်စနဲ့ ကပြာကယာသုတ်ပြီး တံခါးကို အမြန်သွားဖွင့်တယ်။ ကျွန်မလည်းတံခါးကြားမှာ အမြန်ဝင်ပုန်းလိုက်တယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် ဒီနေရာဘယ်လိုရောက်နေမှန်းမသိတာ သူတို့မြင်သွားရင် လန့်အော်မည်စိုး၍ ဖြစ်သည်။
ကျွန်မ ဒီနေ့ ကလေးမလေးအားရှာဖွေမိသည်။ အခန်းထဲမှာများ ငိုနေတာလားဟု ရှာကြည့်သည်။မရှိပါ။ ဒါဆိုသူဘယ်ရောက်နေတာလဲ။သြော် ကလေးသဘာဝများနော် စိတ်ညစ်လည်းခဏပင်။ သူငိုမနေဘူးဆိုတဲ့အသိက ကျွန်မကိုစိတ်ခဏသာ အေးချမ်းသွားစေသည်။ဟုတ်သည်။သူသည် သူငိုတာကို သူများမြင်မှာ အကြောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သူအခန်းထဲမှာရှိမနေဘူးဆိုပါက သူမငိုနေသည်မှာ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းသေချာသည်။ ကျွန်မ မရဲတရဲနှင့် အခန်းအပြင်ထွက်ကြည့်သည်။ အိမ်ရှေ့မှာများဆော့နေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် မီးဖိုချောင်ထဲမှာများလား?????????
ဟော တွေ့ပါပြီ။ သူ ဧည့်ခန်းမှာ။ သူဘာလုပ်နေတာလဲဟု စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူမျက်နှာကျက် မတပ်ထားသေးတဲ့ သူ့ရဲ့ပျဉ်ထောင်အိမ်ခေါင်မိုးကို မျက်တောင်မခပ် ကြည့်နေတာ။ တကယ်တော့ သူ့အိမ်လိုဆိုလိုမရပါ။ ထိုသို့ဆိုလျှင် မိဘအိမ်ဖြစ်မည်ဟု ထင်လျှင်လည်းမှားမယ်။ သူ့မိဘ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မဟုတ်ပါ။ သူ့အမေ၏မောင် သူ့ဦးလေး၏အိမ်ဖြစ်ပါသည်။ သူဘာတွေများ ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားနေတာပါလိမ့်။ ကျွန်မ လူရိပ်အကဲကြည့်၍ သူ့အနားချည်းကပ်လိုက်သည်။ သူက ကျွန်မကိုမြင်တော့ ပြောသည်။ သူလူ့လောကမှာ အသက်မရှင်ချင်တော့ဘူးတဲ့လေ။ အခုသူတို့မိသားစု ကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်တဲ့။ အရင်ကခင်လှပါပြီဆိုတဲ့ သူ့အမေအသိတွေကလည်း ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ ဖုန်းတောင်မဆက်ကြတော့ဘူးတဲ့။ အမေမှာ ဟိုလူ့တွေ့လည်း အောက်ကျခံတောင်းပန်ရ၊ ဒီလူ့တွေ့လည်းအောက်ကျခံတောင်းပန်ရနဲ့ သနားပါတယ်တဲ့။ တကယ်တော့ သူ့မေမေက သူတို့ညီအစ်မသုံးယောက်ကို မွေးကတည်းက ပြုစုကျွေးမွေးလာတာတဲ့။ သူ့အဖေက လခစားဝန်ထမ်း၊ ပြီးတော့ နယ်မှာပဲနေရတာဆိုတော့ သူတို့အတွက် ဘာမှမ၀ယ်ပေးနိုင်ဘူး။တခါတလေ ပြန်လာမှသာ မုန့်လေးတွေဝယ်လာတာတဲ့လေ။ အမေက ဘာလုပ်တာလဲဟု ကျွန်မမေးလိုက်မိသည်။ မေးလိုက်ပြီးမှ ငါမေးသင့်ရဲ့လားဟု စိတ်ထဲ၌ တွေးပြီး သူ့ကိုတချက်အကဲခတ်လိုက်သည်။ သူ့မျက်နှာမှာ ပကတိတည်ငြိမ်နေသည်။ ထို့နောက် သူကပြောတယ်။ သူ့အမေက ဆိုင်လည်းဖွင့်ထားတယ်တဲ့။ ကျောက်တို့စိန်တို့လည်းရောင်းတယ်တဲ့။ အိမ်တို့ဘာတို့လည်း တစ်ခါတလေပွဲစားလုပ်တယ်တဲ့။ ဘုရား ဘုရား။ ကျွန်မဘုရားတမိသည်။ အာဂမိခင်စိတ်ဓာတ်ပါလား။ သမီးသုံးယောက်ကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ဦးဟု ကျွန်မကောက်ချက်ချမိသည်။ သူကဆက်ပြောတယ်။ သူအခုတွေးနေတာတဲ့ သူတို့အိမ်ကို လူကိုယ်တိုင်တမျိုး ဖုန်းနဲ့တဖုံ လာလာပြီး အကြွေးတောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့။ ပေးချင်ရင်တောင် အခုခက်နေတာက သူတို့အိမ်မှာ စားစရာဆန်တောင်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ဟိုတခေါက် သူတို့အိမ်မှာ ဆန်ကုန်တုန်းက သူ့အမေကိုပြောတော့ စိတ်ဆိုးပြီး သူ့ကိုလှမ်းအော်တယ်တဲ့လေ။ ပြီးတော့ ၀ုန်းဒိုင်းလုပ်ပြီး အပြင်ထွက်သွားတယ်တဲ့လေ။ သူအဲဒီနေ့က ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ဘာမှမစားဘဲ အိပ်လိုက်တယ်တဲ့လေ။ ဒါပေမယ့် မနက်နိုးလာတော့ ဗိုက်ဆာလို့အုပ်ဆောင်းဖွင့်လိုက်တာ သူကြိုက်တတ်တဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်လေး အေးခဲနေတဲ့ အပြင်မာတောင်မာနေပြီတဲ့။ သူ့အမေ မနေ့ညက အပြင်ထွက်ပြီးသွားဝယ်တာကြောင်းကို သူ့အစ်မပြောလို့ သူသိရတယ်တဲ့လေ။ ထိုနေ့လည်၌ပင် ဆန်နှစ်အိပ် လာပို့သွားတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ညသူ့အမေပြန်လာတော့ သူတခုတခုထူးခြားလို့ကြည့်လိုက်တာ သူ့အမေနားပေါက် အရင်ကထက်ပိုကျယ်နေတာကို သူသတိထားမိလိုက်တယ်တဲ့။အခုလည်း ဆန်ကထက်ကုန်ပြန်ပြီတဲ့။ သူမပြောရဲပါတဲ့။ သူ့အမေက စီးပွားရေးအခုလိုဖြစ်ကတည်းက ထမင်းဟင်းလည်းမချက်တော့၊ အိမ်မှာလည်းထမင်းမစားတော့ ဆန်အခြေအနေကို မသိ။ တော်သေးတယ်ဟု ဆိုရမည် ထိုကလေးမလေးညီအစ်မအား အမေလိုတမျိုး စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ဆရာမအပျိုကြီးက သူတို့အတွက် ထမင်းဟင်းကအစ စီစဉ်ချက်ပြုတ်ပေးနေလို့။ ကျွန်မအတွေးထဲခဏမျောသွားသည်။ သတိရလာတော့ ထိုကလေးမလေးအားတဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ထိုကလေးမလေးလည်း အဝေးကိုငေးနေပြန်သည်။ ကျွန်မကပင်သူ့ရဲ့ ငေးမောမှုကို ဖြိုခွဲလိုက်သည်။ အခုဘာလိုလုပ်မလဲဟုမေးလိုက်မိသည်။ သူကငေးနေရာမှ ကျွန်မကိုစောင်းငဲ့ကြည့်ပြီး ဒီထုတ်တန်းဘယ်လောက်မြင့်သလဲဟုမေးလိုက်သည်။ ကျွန်မ ပေ၂၀လောက်တော့ မြင့်မှာပေါ့ဟု ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြေလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူထုတ်တန်းပေါ်တက်သွားသည်။ ကျွန်မကြောင်ပြီးငေးနေမိသည်။ သူဘာများလုပ်မလို့ပါလိမ့်။
Posted by cockroach at 12:08 AM4အကြံပေးဝေဖန်စာများ
ထိုအမှားကြောင့် ကျွန်မအားတဖန်ပြန်၍ သတ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်မနောက်တစ်ခါပြန်၍ သေ၀ံ့သည်။
အိမ်ရှေ့၌ ချိတ်ထားသော နာရီက တစ်ချက်ချက် မြည်နေသည်။ ညပေါင်းများစွာ မအိပ်စက်ခဲ့သောကြောင့် မျက်လုံးများကျိန်းစပ်နေသည်။ ခေါင်းမဖြီးပဲထားသည်မှာ အတော်ကြာနေပြီဖြစ်၍ အရင်က နက်မှောင်ပျော့ပျောင်းသော ဆံပင်မှာ ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ခေါင်းထဲ၌လည်း ရီဝေေ၀ နေ့လား ညလားကိုလည်း ကျွန်မ မခွဲခြားနိုင်။ မနက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်မထင်သည်။ခန္ဓာကိုယ်အား ငဲ့ကာ အားယူပြီး နာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ အခုမှ မနက်သုံးနာရီရှိသေးသည်။ ကျွန်မအား အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်နေသော အတွေးများကို ခဏတာမေ့လိုက်ချင်သည်။ အတင်းကျိတ်မှိတ်ပြီး မျက်စိအားပိတ်လိုက်သည်။ မရပါ။ နာကြည်းမှုများက ကျွန်မရင်ထဲ ပြည့်နှက်နေသည်။ မိုးအမြန်လင်းပါစေတော့ဟု ကျွန်မဆုတောင်းမိသည်။ မနက်မိုးလင်းခဲ့လျှင်…………………………………
ကျွန်မသည် ဒီနေ့ကိုစောင့်နေသည်မှာ ၂လရှိပြီ။ အခုတော့ ဒီနေ့ကိုရောက်လာပြီ။ ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမိသည်။ “ငါပျော်ရဲ့လား” လို့။ ကျွန်မထင်သလောက် ပျော်ရွှင်မနေပါ။ ဟုတ်သည်။ဒီနေ့တရားရုံးက နောက်ဆုံး အမိန့်ချမည့်နေ့။ ကျွန်မအတွက် မျှတသောစီရင်ချက်တစ်ခုအား ရုံးတော်ကချပေးမည့်နေ့။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မပျော်ရမည်။ မှန်သည်။ ကျွန်မဘာကိုမှ တွန့်ဆုတ်မနေသင့်ပါ။ နောက်ဆုံးတရားစီရင်ချက်ချအပြီးတွင် အောင်နိုင်သူမှာကျွန်မပဲဖြစ်ရမည်။ ကျွန်မသည် ကိုယ်လုပ်ပြီးသောကိစ္စကို မှားသည်ဖြစ်စေ၊ မှန်သည်ဖြစ်စေ နောင်တ မရတတ်သော အကျင့်ရှိသည်။ အခုတစ်ကြိမ်ရော ကျွန်မနောင်တမရဘဲ နေနိုင်ပါ့မည်လား။ ကျွန်မခေါင်းကို ရမ်းချလိုက်ပြီး “ခင်ငြိမ်းသက် နင်ဘာတွေ တွေဝေနေတာလဲ။ အခုဟာက နင့်ဘက်က ရသင့်တဲ့ လျော်ကြေးကို ပြန်တောင်းနေတာလေ။ သစ္စာမရှိတဲ့သူတွေကို ဒီတိုင်းလွှတ်ထားလို့မှ မရတာ။ နင်မှန်ပါတယ်။”ဟု တကိုယ်တည်း ရေရွတ်ပြီး ကျွန်မ မျက်လုံးကို ကြိုးစားမှိတ်လိုက်ပြီး အိပ်ရန်ကြိုးစားလိုက်သည်။
“မင်းဟာအကြင်နာတရားခေါင်းပါးတဲ့မိန်းမပဲ” မြတ်စွာဘုရား…….ကျွန်မနားနှင့်ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရသည်ကိုပင် မယုံကြည်ချင်။ထိုစကားများသည် ကျွန်မ၏ ယုံကြည်ရဆုံးသော၊ အတွယ်တာရဆုံးသော ခင်ပွန်းက ပြောကြားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မသည် ကိုယ့်နားကို သံသယ၀င်နေချိန်တောင်မရ နောက်ထပ်အသံတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရပြန်ပါသည်။နံရံကို လက်သီးနှင့် ပစ်ထိုးလိုက်သောအသံ။ ကျွန်မလှည့်မကြည့်ခဲ့ပါ။ ထို့နောက် ကျွန်မလေသံအေးလေးနဲ့ပင်
“ရှင်က အခုတော့ ဒေါသထွက်တတ်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။ ကျွန်မကို ထိခိုက်အောင်လုပ်ရင် ရှင်တို့ပဲ ပြန်ခံစားရမှာကို ရှင်ကြိုမတွက်ထားဘူးလား။ ဒါတွေအားလုံး ရှင်တို့လုပ်တာပဲလေ။ တရားခံက ရှင်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲ။ ကျွန်မ မဟုတ်ဘူး”
သူခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားပြန်ပါသည်။ ထို့သို့သူခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားသည်ကို ဒုတိယအကြိမ် မြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူတာဝန်ကျရာ မဲစောက်ကို မလိုက်နိုင်ပါဟုပြောတုန်းကတစ်ကြိမ်၊ အခုတဖန် နောက်တစ်ကြိမ်။
“ကိုယ်မင်းကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။ ကိုယ့်အပြစ်တွေကိုလည်း ၀န်ခံပါတယ်။ ကိုယ်မင်းအပေါ်တာဝန်မကျေခဲ့ဘူး။ အခုဟာက ကိုယ်မင်းကို ခွင့်လွတ်ဖို့တောင်းဆိုနေတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုယ့်ကို အချိန်သုံးလပဲ ပေးပါ။ သုံးလပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်အပြစ်ကို ကိုယ်ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူပါ့မယ်ကွာ။ အဲဒီတော့မှ မင်းကြိုက်သလို လုပ်ပါကွာ” သွားစမ်းပါ။ ဒါတွေ အခုအချိန်မှာ ဒါတွေ အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာ နတ်ပြည်က သိကြားမင်းဆင်းလာပြီး တားရင်တောင်မရဘူး။ ရှင်တို့ပျော်နေတုန်းက ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်ကိုထည့်မတွက်ဘူးမို့လား။ ကျွန်မဘက်ကိုနဲနဲလေးမှ ငဲ့မကြည့်ဘူးမို့လား။ အခုမှ ဘာလို့ ကျွန်မကို စာနာဖို့ သနားဖို့ လာပြောနေရတာလဲ။ ကျွန်မရှင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကို မုန်းတယ်။ကျွန်မခံစားခဲ့ရတာတွေ ရှင်တို့နှစ်ယောက်လုံး ပြန်ခံစားစေရမယ်။ ကျွန်မမဲ့ပြုံး ပြုံးလိုက်သည်။ ပြီးတော့လောကကြီးကို ဟားတိုက်ရယ်မောပစ်လိုက်သည်။ အက်ကွဲနေသော အသံအားပြန်ထိန်းရင်း
“ရှင်က ကျွန်မကိုလျော့တွက်ထားတာကိုး။ အခုအချိန်မှာ ရှင်ဘာပြောပြော ခေါင်းငြိမ့်လက်ခံမဲ့ အရင်က သက် မဟုတ်တော့ဘူး။ တကယ်တော့ ရှင် ကျွန်မကို ပစ်ပယ်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ အခုမှ ဘာလို့လာပြီး ပတ်သက်ချင်ရတာလဲ။ ဘာလဲ အခုရှင်ကြောက်နေပြီမဟုတ်လား? ရှင်က ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကိုလာစမ်းတာကိုး။ သက် ဆိုတဲ့မိန်းမက ဘာကိုမှ နောက်မဆုတ်တတ်တာ ရှင်သိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဘာသူ ဘုရားလေးဘာလေးရှစ်ခိုးပြီး ရှေ့နေလေးဘာလေးဌားလိုက်ဦးပေါ့။ ပြီးတော့ ရှင်ရဲ့ အငယ်အနှောင်းလေးကိုလည်း အားပေးလိုက်အုံး။ သူ့ခမျာ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီး မဟုတ်လား? ကဲ ရှင်ပြန်တော့ တရားရင်ဆိုင်တဲ့ နေ့မှပဲ ထပ်တွေ့ကျတာပေါ့။ ရှင်ကံကောင်းပါစေ” သူအံကျိတ်လိုက်သည်ကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ထားသည့် ကြားမှ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သေးသည်။ ထို့နောက် သူဝုန်းခနဲထကာ ကျွန်မရှေ့က လှည့်ထွက်သွားသည်။
ကျယ်ပြန့်သော နောက်ကျောပြင်အား ငေးရင်း ကျွန်မမျက်ရည်ဝဲလာသည်။ မဖြစ်ပါ ကျွန်မမျက်ရည်ကျလို့ မဖြစ်ပါ။ ငိုတယ်ဆိုတာ ရှုံးနိမ့်တဲ့သူတွေ လုပ်တဲ့အလုပ်။ ကျွန်မ မရှုံးနိမ့်ပါ။ ကျွန်မနိုင်လိမ့်မည်။ သေချာသည် ဒီပွဲမှာ ကျွန်မနိုင်လိမ့်မည်။ ရှုံးနိမ့်မည့် ထိုသူနှစ်ယောက်၏ ငိုကြွေးသံအား ကြည့်ရင်း ကျွန်မဟားတိုက်ရဦးမည်။ နှစ်ယောက်။ မဟုတ်ပါ။ ထိုသူနှစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါ။ နောက် လအနည်းငယ်အတွင်း လူ့လောကရောက်လာမည့် ကလေးငယ်တစ်ဦးပါလိမ့်ဦးမည်။
“ကိုရယ်သေချာလို့လား positive ဆိုတာ” ကျွန်မတအံ့တသြမေးလိုက်သည်။ “ဟုတ်တယ်သက် သေချာတယ်။”သူအသံမှာ တည်ငြိမ်နေသည်။ ကျွန်မ ဆက်မမေးရဲပါ။ ကျွန်မ ဘာပြန်ပြောရမည်ကိုလည်း ရှာလို့မတွေ့ပါ။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနှင့် အခုကိစ္စကို ကြားရသည်မှာ မထူးဆန်းသော်လည်း ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ကျွန်မဆွံ့အနေသည်။ သူဝမ်းနည်းနေလား ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျနေလား။ တစ်ဖက်မှ ပြောနေသော ကို့အသံကို မကြားတချက် ကြားတစ်ချက်။ ထိုနောက်သတိပြန်ဝင်လာကာ ငါသူ့ကို နှစ်သိမ့်ရမယ် ဟုတ်တယ် အခုချိန်မှာ အရေးကြီးဆုံးက သူစိတ်ဓာတ်မကျဖို့ပဲ။ သို့သော်ကျွန်မ သူ့အတွက် ဖြေသိမ့်စရာ စကားရှာမတွေ့။
“သက် ကို အခုချိန်မှာ တစ်ယောက်ထဲနေချင်တယ်။ သက်ကိုလည်း ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကိုတို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကို စဉ်းစားပြီးပြီ။ ကိုတို့ ကွာရှင်းကြရအောင်” သူသည် ကျွန်မစိတ်ကိုသိသည်။ သူထိုသို့ပြောလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်မဘာတွေဆက်၍ ဆက်၍ တွေးနေမည်ကိုလည်း သူသိသည်။ ကျွန်မ၀န်ခံပါတယ်။ ကျွန်မသည် အတ္တကြီးသည်။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်သူ့ခံစားချက်ကိုမှ ဂရုမစိုက်တတ်။ အထူးသဖြင့် သူနှင့်အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၇နှစ်လုံးတွင် သည်းခံခဲ့သည်မှာ သူပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်မညညအိပ်မပျော်ပါ။ သူ့မှာ HIV positive တဲ့။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ကျွန်မတွင်လည်းထိုရောဂါပိုး ရှိနေနိုင်သည်။ ကျွန်မကြားကြားချင်း ကြောက်မိတာအမှန်ပါ။သို့သော် သူ့နောက်လိုက်မနေသည်မှာ ၁နှစ်မျှရှိနေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ သုံးလတစ်ကြိမ်သွေးလှူဖြစ်သဖြင့် သွေးအမြဲစစ်နေရသည်ကတစ်ကြောင်း အခုချိန်တွင် HIV ပိုးရှိမနေသည်မှာ သေချာသည်။ ကျွန်မတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ရမည်။ ဆရာဝန်အလုပ် သို့မဟုတ် ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်းသည်။ ကျွန်မအမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြည့်သေးသည်။ ကျွန်မ သူ့အနားမှာ သူသေဆုံးသည်အထိ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနှင့် သူကိုစောင့်ရှောက်ပြီးနေရင်ရော? သူနှင့်အတူတူနေပါက ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုပင်ထိန်းစေကာမူ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဒီရောဂါကျွန်မဆီ မကူးစက်နိုင်ပါဘူးဟုမပြောနိုင်။ ထိုရောဂါပိုးရှိနေမှန်းသိလျှက်နှင့် ဆရာဝန်တစ်ယောက်၏ တာဝန်ကိုဆက်ယူ၍မသင့်ပါ။ကျွန်မ ဆရာဝန်ဘ၀ကိုမစွန့်လွှတ်ချင်ပါ။ သူ့ပြောသည့်အတိုင်း ကွာရှင်းပါကလည်း ၇နှစ်လုံးလုံး အေးအတူပူအမျှနေလာသော ခင်ပွန်းအပေါ်တာဝန်မကျေရာ ရောက်မည်။ အခုကိစ္စမှာ တာဝန်တွေ၊ ဘာတွေ ဘေးချိတ်ထားဦး။ကျွန်မ၏ စိတ်ရင်းအမှန်ကဘာလဲ။ ကျွန်မဟာ သူနာမကျန်းဖြစ်တော့မှ စွန့်ခွာမည့်လူစားလား။ ဒီလိုဆို ကျွန်မ သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ လိမ်တာပဲ။ ကျွန်မ မလိမ်ပါ။ ကျွန်မ သူ့ကို တကယ်ချစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မ ရင်နှင့်ရင်းပြီးကို ချစ်ခဲ့သည်။ သူ့ပုံရိပ်များ ကျွန်မမျက်စိထဲတွင် တရေးရေးမြင်လာသည်။ ထို့နောက် ကျွန်မခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချလိုက်သည်။
“ကိုရဲခေါင်နဲ့ တွေ့ချင်လို့ပါရှင်” ကျွန်မသူ့အားဖုန်းတောင်မဆက်ပဲ သူရှိရာ မဲစောက်သို့ လိုက်လာခဲ့သည်။သူသည် အံ့သြနေလိမ့်မည်။ ကျွန်မ၏ အချစ်အတွက်လည်း သူဂုဏ်ယူနေလိမ့်မည်။
သို့သော် တစ်ဖက်လူ၏ စကားမှာ ကျွန်မမျှော်လင့်ထားသလိုမဟုတ် “ကိုရဲခေါင် သူ့မိန်းမ ကိုယ်ဝန်အဆိပ်တက်နေလို့ ဆေးခန်းသွားပြပါတယ်ခင်ဗျာ”
“ရှင်”ကျွန်မ ယောင်ရမ်းပြီးအော်မိသည်။ နွေခေါင်ခေါင်မှာ ကျွန်မ ခေါင်းကို မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလိုပဲ။ ကျွန်မ ခေါင်းမိုက်ခနဲမူးသွားသည်။ ကိုရဲခေါင်ဆိုသူ၏ တရားဝင်ယူထားသောမိန်းမက ကျွန်မလေ။ လူမှားတာဖြစ်မှာပါ။ ကိုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါ။ “ဒီဝင်းထဲမှာ ကိုရဲခေါင်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဟင်။” ကျွန်မ အသံကိုထိန်းပြီးပြန်မေးလိုက်သည်။“ကျောက်ပန်းတောင်းသား ကိုရဲခေါင်တစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ် ခင်ဗျာ” အို့ ဒါဆိုသေချာသွားပြီပေါ့ ကျွန်မ၏ခင်ပွန်း ရဲခေါင်ဆိုတာ။ ကျွန်မ အငွေ့လေးအဖြစ် ဒီကမ္ဘာမြေမှ စွန့်ခွာသွားချင်သည်။ အရှင်လတ်လတ်မြေမျိုသွားသလိုပဲ ကျွန်မရင်ထဲပူနေသည်။ဒါကျွန်မ၏ သိက္ခာကိုလည်း စော်ကားတာ၊ ကျွန်မ အချစ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာ။ တရားဝင်မယားရှိရက်နဲ့ မိန်းမနောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူတာ လူ့စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်တာ။ ကျွန်မသည်းမခံနိုင်ပါ။ ကျွန်မဒီနေရာတွေ ကြာကြာနေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကျွန်မဒီနေရာက အမြန်ဆုံးထွက်သွားဖို့ပါပဲ။ ကျွန်မရှောင်ပြေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်မ၏ မျက်ရည်စများအား လူတွေအမြင်မခံချင်ရုံသာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်မနဲ့ ဝေးသွားတဲ့ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ၇နှစ်တာလက်တွဲခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်က ကုန်ခမ်းသွားနိုင်သလား။
“ ကိုရဲခေါင် ကျွန်မ ခင်ငြိမ်းသက်ပါ။ ကျွန်မ အခု (----) ဟိုတယ်မှာ။ အခုလာတွေ့ပါ။” ကျွန်မပြောဆိုပြီး ဖုန်းချလိုက်သည်။ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ ကျွန်မကို ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့လာတွေ့မလဲဆိုတာ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်၏ ပါးစပ်က ဘာစကားများထွက်လာမလဲဆိုတာ။
“ကျွန်မတံခါးဖွင့်ထားတယ် ၀င်ခဲ့ပါ။” သူဝင်လာသောအသိနှင့်တပြိုင်နက် သူ့ရေမွှေးနံ့ ကျွန်မရလိုက်သည်။ တချိန်က ရူးသွပ်ခဲ့သော ထိုအနံသည် အခုချိန်မှာ စက်ယုတ်ဖွယ်ရာ။
“ရှင့် အတွက် ကလေးက အဲလောက်တောင်အရေးပါလား” ကျွန်မဆီး၍ မေးလိုက်သည်။ “ရှင်ကျွန်မကို မပေါင်းချင်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာကမှ ကျွန်မအတွက်နေသာဦးမယ်။ အခုတော့ အကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီး လိမ်တာကျွန်မ ဘာသဘောလဲ။ ကျွန်မဘာကိုမှ အရာအားလုံးကို စွန့်ပြီး ရှင့်နောက်လိုက်လာခဲ့တာ။ နောက်ဆုံးရလဒ်က ဒါပဲလား။ ပြောပါအုံး။ ရှင်တော်ပါတယ်။ ကျွန်မအပေါ် အလှပဆုံးနဲ့ အသေသပ်ဆုံး အနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားတာ။ ရှင့်မှာ HIV ရှိတာကို သိရင် ဆရာဝန်အလုပ်ကို ချစ်တဲ့ ကျွန်မ ရှင်ပြောတာကို လက်ခံပြီး ကွာရှင်းပေးမှာကို ရှင်ကကြိုသိနေလို့မဟုတ်လား။ ဒါဆိုရှင်မှားသွားပြီ။ သက်ဆိုတဲ့မိန်းမက ရှင့်အတွက်ဆိုရင် ဘာကိုမှ မကြောက်ဘူးဆိုတာကို ရှင်အစကတည်းက ရိပ်မိဖို့ကောင်းတယ်။”
“ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ၊ ကိုလည်း ဘာမှကြံရာမရတော့လို့ပါ။ ကိုယ့်ဘက်ကလဲ လွန်ထားပြီးပြီဆိုတော့ ကိုယ်မှာတာဝန်ယူဖို့ရှိတယ်။မင်းရဲ့အချစ်ကိုလည်းစော်ကားမိသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ကိုတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။ ကိုယ်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။မင်းနားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လဲ ကိုယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တို့ ကွာရှင်းကြရအောင်”
ဘာပြောတယ်။ ကျွန်မနားလည်မပေးနိုင်ပါဘူး။ရှင်တို့ပျော်ရွှင်ဖို့ ကျွန်မကငိုကြွေးနေရမှာလား။အဇာတသတ် ငရဲဆင်းခါနီး ချွန်းမရှိ အစွမ်းကုန် မိုက်နေသလိုပါပဲလား။
“ကျွန်မမနက်ဖြန် မန္တလေး ပြန်မယ်။ အဲဒီမှာမှပဲ ထပ်တွေ့ကြတာပေါ့”ကျွန်မ စကားကို သူနားလည်မလည်တော့ မသိ။ သို့သော် မကြာမီသူနားလည်သွားလိမ့်မည်။ သူတင်မဟုတ် သူ့နောက်မိန်းမပါ နားလည်သွားလိမ့်မည်။
ကလေးမရနိုင်သော မိမိကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ရမည်လား။ အိမ်ထောင်ဖောက်ပြန်ရက်သော သူ့ကို အပြစ်တင်ရမည်လား။ ရက်စက်လှသောကံကြမ္မာကိုပဲ အပြစ်တင်ရမည်လား ကျွန်မ ဝေခွဲလို့မရ။ မန္တလေးကိုပြန်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာမီ ကျွန်မ၏ဆေးရုံသို့ တရားရုံးမှ ဆင့်ခေါ်စာရောက်လာပါသည်။ ကျွန်မအတွက် တရားမျှတစွာ ဆုံးဖြတ်ပေးမည့်နေ့ နီးလာပါပြီ။ အကယ်၍ သူအမှုရှုံးလျှင် သူအလုပ်ပြုတ်လိမ့်မယ်။ ကံဆိုးလျှင် ထောင်ပါကျနိုင်သည်။ ဒီလိုဆိုရင် ကြေကွဲစရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လေးပေါ့။ မိသားစုလေးတစ်စု ပြိုကွဲသွားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့။ ကျွန်မ သတိပြန်ဝင်လာသည်။အခုကျွန်မသူများအိမ်ထောင်ရေးကို ဖျက်ဆီးပစ်နေတာပါလား။ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အသိုက်အမြုံကို ဖျက်ဆီးပစ်နေတာပါလား။ မဟုတ်ဘူး သူတို့က အရင် ကျွန်မ၏ ငြိမ်သက်နေတဲ့ရေပြင်ကို စပြီးခဲနဲ့ ပစ်ကြတာ။ တဖန် နောက်လအနည်းငယ်တွင် လူ့လောကရောက်လာမည့် ကလေးငယ်။ ထိုကလေးငယ်၏ဘ၀ကိုရော ထည့်မတွက်ဘူးလား။ အပြစ်မရှိသော ထိုကလေးငယ်မှာ မိဘများ၏အစား ခံစားရလိမ့်မည်။ ကျွန်မတွေဝေနေပါသည်။ နားစမ်းပါ။ ငါမကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့မကောင်းလို့ မှန်လို အရောင်ပြန်ဟပ်တာ။ မုန့်ကိုသာဝေစားမယ်။အချစ်ကို ဘယ်လိုဝေမှာလဲ။ နင်တို့ကတော့ပျော်ရွှင်ပြီး ငါ့ကိုတော့စိတ်ဆင်းရဲချင်ဆင်းရဲပါစေပေါ့ ဟုတ်လား။ ငါဝမ်းနည်းနေရရင် နင်တို့လည်းမပျော်စေရဘူး။ နင်တို့ကို ငါဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။
“အသင် မောင်ရဲခေါင်သည် တရားဝင်မယားရှိလျှက်နှင့် နောက်မိန်းမထပ်ယူခြင်း၊ တရားဝင်မိန်းမအား လိမ်ညာလှည့်ဖြားပြီး ကွာရှင်းလက်မှတ်ရယူခြင်း အစရှိသည့် အပြစ်မှုမှ ထင်ရှားသဖြင့် ပုဒ်မ----------အရ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ်ကျစေ”
အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ကျွန်မအတွက် မျှတသော တရားစီရင်ချက်ကို ချပြီးသွားသည်မှာ တစ်လတိတိရှိခဲ့ပြီ။ ဂယောက်ကယက်ဖြစ်ခဲ့သော ရင်ခွင်မှာ တည်ငြိမ်စပြုလာပြီ။ ကျွန်မစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိသလို ၀မ်းနည်းမှုလည်းမရှိခဲ့ပါ။ သူ့နောက်မိန်းမအကြောင်းကိုလည်း နောက်ထပ်မစုံစမ်းဖြစ်ခဲ့တော့။ သူ့အတွက်တော့ မိန်းမချင်းစာနာမိပါသည်။
“ဒေါက်တာ လူနာတစ်ယောက် အရေးပေါ်ရောက်လာတယ်။” သူနာပြုဆရာမလေး မျက်စိပျက်မျက်နှာပျက် လာပြောသဖြင့် ကျွန်မ၏အတွေးများ ရပ်တန့်သွားသည်။
လူနာသည် နာလွန်းသဖြင့် ညီးညူနေသည်။
“Blood pressure ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆရာမ”
“ ၇၅ ၅၀ ပါ ဒေါက်တာ”
ကျွန်မ ဘုရားတမိသည်။ အောက်သွေးအလွန်ကျနေသည်။ ပြီးတော့ PDD ။ ကျွန်မ အလျှင်အမြန်မွေးခန်းထဲသွင်းလိုက်သည်။ “ဆရာမ သွေးဌာနကို ဖုန်းဆက်ပါ။ အိုသွေး ၂ပုလင်းအမြန်ပေးပါလို့။” လူနာသည် သတိမရတချက်၊ ရတချက်။ လူနာသည် ညှစ်နိုင်စွမ်းအားမရှိတော့။ ဒီလိုဆိုမဖြစ် ကလေးသည် မိခင်ဝမ်းထဲ၌ပင် ရေမွန်းပြီးသေသွားနိုင်သည်။ ကျွန်မ ညှက်နှင့်ဆွဲမွေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရမည်။ ကလေးက ခေါင်းကစဆင်းလာသည်။ အကယ်၍ ကလေးသည် ခြေထောက်ကစဆင်းလာပြီဆိုပါက ညှက်နှင့်ဆွဲမွေးရန်ပင် ခက်နေလိုက်မည်။ ကျွန်မတို့ မွေးခန်းထဲတွင် ၂ နာရီမျှကြာခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားရကြိုးနပ်ပါသည်။ လူ့အသက်နှစ်ချောင်းကယ်ခဲ့နိုင်သည်။
“ဒေါက်တာ ကုတင် ၁ ကလူနာ သွေးပေါင်တွေကျနေတယ်။ ”
ကျွန်မအမြန်ပြေးသွားသည်။ ဟုတ်သည် လူနာမှာ သွေးသွန်နေသည်။ ကျွန်မ အသက်ကယ်ဆေးထိုးရန် အမြန်ပြင်လိုက်သည်။ ကျွန်မလူနာအား နှလုံးခုန်သံနားထောင်ရန် ပြင်ဆင်လိုက်စဉ် အေးစက်စက်အရာတစ်ခုက ကျွန်မ၏လက်အား လာပြီးထိတွေ့လာသည်။ ကျွန်မလှည့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ထို့နောက် လူနာသည် ကျွန်မအား “မမှီတော့ဘူးမမ ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ၊ ညီမ မှားခဲ့သမျှ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်မ နောက်ဘ၀မှပဲ မမရဲ့ ကျေးဇူးကိုပြန်ဆပ်ပါ့မယ်။ ညီမကိုခွင့်လွှတ်ပါ။” လူနာသည် အသက်ရှုရပ်သွားသည်။ ကျွန်မစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ အသက်မရှိတော့။ထို့နောက် ကျွန်မစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ပင် ကလေး၏ မှတ်တမ်းအားကြည့်လိုက်မိသည်။
ကျွန်မအလွန်ပင် မှင်သက်မိသည်။ဒါ…ဒါဆို ဒီကလေးက ကျွန်မခင်ပွန်း၏ အသွေးအသားပေါ့။ ဒါဆိုအခု သေသွားသည်မှာ မြခက်။ သေသူ၏နောက်ဆုံးစကားများကို အခုမှသေချာနားလည်သွားတော့သည်။ ဒီလိုဆို မြခက်သည် ကျွန်မကိုမှတ်မိနေသည်။ ကျွန်မနှင့်မတွေ့သည့် ၁လအတွင်း မြခက်သည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ သိသိသာသာ ပိန်ချုံးသွားသည်။ ဒါကြောင့်မို့ သူကလေးကို မွေးဖို့ အားအင်မရှိတော့တာ။ ဒါဆို ကျွန်မကြောင့် မြခက်သေတာပေါ့။ ကျွန်မသာ တရားမစွဲခဲ့လျှင်……..
“ခွမ်း…………………ခွမ်း…………………..ခွမ်း” မီးဖိုချောင်မှ အသံကြားလိုက်ပါသည်။ ၁၀နှစ်သာရှိသေးသော ထိုကလေး၏ ရင်ထဲ၌ နာကြည်းမှုများပြည့်နှက်နေသည်။ ကျွန်မအားမုန်းတီးနေသည်။ သူ၏အဖေနှင့်အမေကို သတ်သော သူတစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်မကို မုန်းတီးနေသည်။ ကျွန်မထိုကလေးမလေးအား လူလားမြောက်အောင် စောင့်ရှောက်ဖို့ ရှေ့ရေးအားလှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ရင်း သက်ပြင်းချလိုက်မိသည်။
ကျွန်မ၏အမှားကြောင့် ကျွန်မအားတဖန်ပြန်၍ သတ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်မနောက်တစ်ခါပြန်၍ သေ၀ံ့ပါသေးသည်။
ရဲခေါင်သည် ထောင်ကျပြီး ၃နှစ်အကြာတွင် ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
Posted by cockroach at 12:07 AM6အကြံပေးဝေဖန်စာများ
အင်း…….ဘလော့ကတော့ လျှာရှည်ပြီးထောင်ပြီးသွားပြီးပြီ။ ဘလော့ထောင်ပြီးမှပဲ အချိန်ကတမင်သက်သက်ညစ်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ အချိန်အချိန် ဘယ်တွင်းထဲက နိူက်ရပါ့မလဲနော်။ စာမရေးဖြစ်သေးတာက အခုတလော လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေလို့ပါ။ အချိန်လုလုပြီး ပို့စ်အသစ်တင်တင်နေရတဲ့ ဘလော့သမားများကို ကြည့်ပြီး အကြံပေါ်လာလို့ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ စိတ်ဝင်စားသူများကိုလည်း ရှယ်ရာဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ အခုတလော economic crisis ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘက်မှာ သေချာတာတစ်ခုခုတော့ ရှိသင့်တာပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား……) dividend အနေနဲ့တော့ ၁၄၀% ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်ရင် တိုးတက်သလို တိုးပေးဖို့လည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးပါ။ သြော် အရေးကြီးတာပြောဖို့မေ့နေတယ်။ အဓိကလုပ်ငန်းကတော့ connector လို့ခေါ်တဲ့ electronic ပစ္စည်းတစ်ခု တီထွင်မလို့ပါ။ သူ့ရဲ့ အလေးချိန်ကတော့ 14.4 kg ပဲ လေးပါတယ်။ အလျားကတော့ ၃ လက်မ နှင့် အနံကတော့ ၂ လက်မသာရှိတဲ့ memory chip တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်အတု ထည့်သွင်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ wireless အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် သွားလေရာနေရာ မှာ အလွယ်တကူယူသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးစိုခံမည့် မိုးကာသားအားလည်း အပေါ်မှ တစ်ထပ်အုပ်ထားမှာ ဖြစ်လို့ နေပူပူ မိုးရွာရွာစိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့။ ဘက္ထရီအတွက်လည်း မပူရအောင် နေ့မှာဆို နေစွမ်းအား၊ ညမှာဆို လျှပ်စီးမီးစွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် စီမံထားပါတယ်။ တကယ်လို့ နေ့အလင်းရောင်၊ လျှပ်စီးမီးရောင်မရှိတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ၁၀နာရီကြာ သုံးခံနိုင်မဲ့ storage ပါထည့်သွင်းပေးထားမှာပါ။ ထူးခြားချက်မှာ ထိုပစ္စည်း သည် သူ့အား ပထမဆုံး စသုံးမည့် လူ၏ အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။အသုံးများသော ဘာသာစကားကြီး ၁၀၀ကျော်ကို လိုသလို လှည့်၍ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးသော မြန်မာစကားအားလည်း ထည့်သွင်းသုံးနိုင်မည့် စက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကိုတော့ cost management ရဲ့ report တစ်ခုအရ US $ 200 လို့ အကြမ်းဖျင်းလျာထားပါတယ်။ blog member များဆိုလျှင် အထူး discount ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံ ကိုတော့ လုပ်အားခ နည်းတဲ့ မလေးရှားမှာ ထောင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ မြန်မာလုပ်သားများအားလည်း မလေးရှားနိုင်ငံမှာ wp နှင့် အလုပ်ခေါ်ဖို့ မလေးရှားနိုင်ငံက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက လူကြီးတွေနှင့် စကားပြောဆိုပြီးပါပြီ။ စင်င်္ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ representive company အဖြစ်ပဲ တည်ထောင်လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းမှာ ၁နှစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာမှာ ISOအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်လျှောက်ပါမယ်။ ISOလက်မှတ်ကျသည်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအားစတင် ဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် သိချင်လျှင် ဖုန်းနံပါတ် ******** သို့ ၂၄နာရီလုံး စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှ customerများအတွက် လိပ်စာ ဘလာ ဘလာ သို့လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
စက်၏ အဓိက ဖန်ရှင်မှာ လူ၏ဦးနှောက်နှင့် ကွန်ပြူတာကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူ၏ဦးနှောက်ကစေခိုင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက် ကွန်ပြူတာအား အလိုအလျှောက် ပွင့်စေကာ ခေါင်းထဲ၌ ရှိသောစာများအား ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်စရာမလိုဘဲ မော်နီတာပေါ်မှာ ရိုက်ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်။ အိပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အရာတွေကို ကွန်ပြူတာမှာ စာစီပေးမဲ့ စက်ကလေးပါ။ ကဲ စိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင် ဖုန်းကလေးသာ ဆက်လိုက်ပါ……………………………………
Posted by cockroach at 9:03 PM9အကြံပေးဝေဖန်စာများ
လူနတ်ဘ၀၊ သန္ဓေရ၊ မြတ်လှကျောင်းအလှူ။
တိုက်တာဗိမာန်၊ မြင့်စွာစံ၊ ပိုင်ရန်ကျောင်းအလှူ။
ကြောက်သွေးမရှိ၊ ရဲရင့်ဘိ၊ မြတ်၏ကျောင်းအလှူ။
တိရစ္ဆာန်၊ သရဲဘေး၊ ရန်မှောင့်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကျောင်းအလှူ။
အိမ်မက်လှလှ၊ မြင်မက်ရ၊ ကောင်းလှကျောင်းအလှူ။
သူငယ်မပြန်၊ သတိမှန်၊ ရရန်ကျောင်းအလှူ။
မြတ်ရဟန္တာ၊ နိဗ္ဗာန်သာ၊ စံရာကျောင်းအလှူ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ မကြာသေးမီကမှ ၀ါဆိုရန် ကြွလာသော ကော့သောင်းဆရာတော်တစ်ပါး၏ ဆုံးမစာလေးပါ။
ဆရာတော်၏ ဘွဲ့တော်မှာ ဒေါက်တာ အရှင်ဇယတိဿဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်သည် အစက Choa Chu Kang ရှိ ဘဘကြီးတစ်ဦး၏နေအိမ်၌ သီတင်းသုံးနေသော်လည်း ထိုဘဘကြီးတို့သည် August လ၌ အိမ်ပြောင်းမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဆရာတော်သည် ကျွန်မတို့ နေထိုင်သော Bukit Gombak တွင်လာရောက်၍ အိမ်ငှားကာ ကျောင်းထိုင်နေသော ဆရာတော်တစ်ပါးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်နှင့်စသိပုံမှာ တစ်နေ့သော သောကြာနေ့၌ အဒေါ်ဖြစ်သူသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမည် လိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ကြဟု ခေါ်လာပါသည်။ စင်္ကာပူရောက်သည်မှာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်း မည့်သည့်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုမှ မရောက်သေးပါ။ (မှတ်ချက် ။ ။ သင်္ကြန်တွင်း Eunos ကျောင်းတွင် မုန့်သွားစားခဲ့သည်မှလွဲ၍)အကြောင်းမတိုင်ဆိုင်သေး၍လည်း ပါမည်။ သွားမည်ဟုမှန်းထားရုံ ရှိသေး တစ်ခုခုပေါ်လာကာ ပျက်စမြဲပင်။ ထို့ကြောင့် ထိုနေ့၌ အားရ၀မ်းသာစွာဖြင့် ဘုန်းဘုန်း၏ ယခင်ကျောင်းအား လိုက်သွားမိပါတော့သည်။
ကျောင်းသို့ရောက်သောအခါမှ ဆရာတော်သည် မကြာမီကျောင်းပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့ရသည်။ ထိုနေ့၌ ဆရာတော်အား ၀ါတွင်းသုံးလလုံး၌ မည့်သည့်နေရာကိုမှ ကြွခွင့်မရှိသည်မှာ မှန်ပါသလားဟု လျှောက်ခဲ့ရာ ဆရာတော်က ၀ါတွင်းသုံးလ၌ ဘုန်းကြီးများသည် မူလသီတင်းသုံးသောနေရာမှ တခြားတစ်နေရာကို သွားရောက်၍ သီတင်းသုံးခွင့်ရှိပါသည်။ သို့သော် (၇) ရက်မြောက်သောနေ့၌ ယခင်ဝါဆိုခဲ့သောနေရာသို့ ပြန်လည်လာရောက်၍ သီတင်းသုံးရသည်ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တစ်နေရာတည်း၌ သီတင်းသုံးခြင်းသည် ဘုန်းကြီးများအတွက် ကထိန်အကျိုးကို ခံစားခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကထိန်အကျိုးကို ခံစားခွင့်ရှိသည်မှာလည်း ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ကိုလည်း မှတ်သားခဲ့ရပါသည်။
ဆရာတော်သည် ကျွန်မတို့သွားရောက်ခဲ့သော နေ့၌ပင် ပွဲစားတစ်ဦးနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ယခုကျောင်းတည်ထားသော ဤအိမ်လေးအား ငှားရမ်းခဲ့ကာ နောက်တစ်နေ့၌ ကျောင်းပြောင်းလာပါတော့သည်။ကျောင်းအသစ်သို့သွားရောက်ကာ ဆရာတော်အား ဆွမ်းသွားပို့သော အဒေါ်နောက်သို့ ကျွန်မတို့ ညီမနှစ်ယောက်လိုက်ရာမှ ဘုန်းဘုန်းနှင့်စကားစပ်မိကာ ဘုန်းဘုန်းက မြန်မာစာရိုက်တတ်လားဟုမေးလာပါသည်။ မကြာသေးမီက ကျင့်ထားသော မြန်မာစာအား နှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်ကာ ဖြည်းဖြည်းနှင့် တစ်လုံးခြင်းရိုက်ရပါတော့သည်။ ထိုရိုက်ပေးခဲ့သော စာများအား ဘုန်းဘုန်း၏ ကျောင်းဖွင့်ပွဲ၌ လက်ကမ်းစာစောင်အဖြစ် ဝေကြောင်းကို ထိုကျောင်းဖွင့်ပွဲနေ့ရောက်မှ သိခဲ့ရသည်။ ဆရာတော်က သူငယ်ချင်းများရှိရင် ခေါ်ခဲ့ဟုပြောသဖြင့် မနက်ကရောက်ခဲ့ပြီးသော ကျောင်းလေးအား ဒုတိယအကြိမ် သူငယ်ချင်းများနှင့်ထပ်သွားခဲ့မိရာ နှစ်ခေါက်လာစားသော ကလေးမများဟု နာမည်တွင်သွားလေတော့သည်။
ဆရာတော်သည် ယခုအခါ တရားဓမ္မများအား ဟောကြားလျှက်ရှိပါသည်။ စနေနေ့၌ ဓမ္မာစင်္ကြာအသင်းရှိသည်ဟုလည်းသိခဲ့ရပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပဌာန်းတရားမြတ်၏အနက်အား လည်းဟောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါသည်။ စင်္ကာပူရောက်မြန်မာများအားလည်း ကုသိုလ်ရေးမို့ လက်မနှေးပြောချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီပို့စ်အား တင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဘုန်းဘုန်း၏လိပ်စာမှာ....
Sayataw Dr.Ashin Jayatissa
#04-376, Blk 372,
Opp. Bukit Gombak MRT
ph : 9120 2695 ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက် လာရောက်၍ တရားပြပေးသောဆရာတော်၏ ကျောင်းအသစ်လေးအား အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက် တဖက်တလမ်းက ပါဝင်ကုသိုလ်ယူကြအောင်လား..................
Posted by cockroach at 1:53 AM3အကြံပေးဝေဖန်စာများ
singaporean တွေကို မတည့်လို့ singaporean တွေကြောက်တဲ့ cockroach ဖြစ်ချင်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ သူတို့ကလည်းသူတို့ ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ cockroach ကိုမှကြောက်ရတယ်လို့။ အဲဒီတော့ ဒီကလည်း ပြန်ခြောက်ရုံပေါ့။ဟုတ်ဖူးလား?..
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကြီးပါပဲ။ ဘလော့လောကကို ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်လာပေးသော ဘလော့ဂါများ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်သည်။ အကယ်ဒမီပေးပွဲလိုပဲ ကိုယ့်အမျိုးကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ခွင့်ပြုပါ။ စာရေးရာတွင် အဖက်ဖက်မှကူညီပေးသော အမအားလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။(ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် သူကသတ်မှာ ဟီး) အတောင်ပေါက်စဆိုတော့ အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါ။ စာရေးဆ၇ာတွေလိုပဲပြောရရင်တော့ ဆက်၍ကြိုးစားပါအုံးမည်....
မမ...................ကလေးမလေးက နောက်မှ ကျွန်မကိုသိ...
လာလည်ပေးလို့ ကျေးဇူးနော်။ ကံကြုံလို့ဆုံခဲ့ရင်လည်း မုန့်ဝယ်ကျွေးလို့ရပါတယ်။ (:
မောင်မိုးသားရဲ့ တစ်နေရာ . . .